ingcindezi Human - kungcono blood pressure, izinkomba ezikhombisa ukuthi zibangelwa imisebenzi umsebenzi inhliziyo. Lapho yokulinganisa ingcindezi is kunakwe okuthiwa engenhla - systolic ezingeni, okuyinto eyenzeka ngesikhathi ukusikwa imisipha yenhliziyo, futhi aphansi - diastolic ezivukayo ngesikhathi zokuzilibazisa.
Ngokuvamile, le nkomba blood pressure kumele singeqi emamaki 120/80. Ngaphezu kwalokho, odokotela abaningi bayavuma ukuthi izinga umfutho wegazi usuke ephelele. Noma kunjalo, ukucindezela ekahle womuntu - 110/70, abanikazi okuyinto abantu okunempilo kuphela kungaba. Yiqiniso, le nkomba kufanele kulandelwe - ukuqinisa impilo yabo bese uzama ukusindisa lo mphumela iminyaka eminingi.
Ngokwejwayelekile kwamukelekile ukuthi ngeminyaka, isisindo somzimba, ngokuvamile kwandisa, futhi nalo ukwanda umfutho wegazi futhi kuyinsakavukela ubudala. Nokho, odokotela German uqaphele ukuthi abantu abanjalo eyinqaba abaphila impilo okungenamsoco futhi ukhuthaze ukuba ucabangele lo mqondo kungamukeleki. Kususelwa izifundo zokwelapha olwenziwa, bathi ngokudla ukudla okunempilo ukuqeqeshwa ngokomzimba, ezempilo-ukugqugquzela, futhi akukho okubi imikhuba indoda ingcindezi angase abe amazinga evamile kuze yokuguga.
Kodwa uma zonke ingcindezi akuyona evamile? Okufanele ukwenze ukuze ugweme nomfutho wegazi ophezulu - high blood pressure, okuyinto kufaka engozini yokuthola izifo eziphathelene nenhliziyo ngisho unhlangothi. Okokuqala ubukeza ukuphila kwakho kungaba into ofuna ukushintsha bese uthatha izinyathelo ezimbalwa bebheke impilo. Uma ngaphambi nomfutho wegazi ophezulu kwakubhekwa njengesibusiso isifo lesizukulwane esidala namhlanje "omncane". Abantu abasha, cishe kokufinyelela eminyakeni ewu 25, baqale yilesi sifo. Nokho, ukuze lesi sifo, ukubhekana kungase kube kuwufanele yizimbangela yayo kuphela.
Lahla isisindo okweqile, okwandisa ingozi yomfutho ophakeme wegazi.
Yehlisa usawoti lakho lokuphuza.
Yehlisa ukusetshenziswa wakho ngophuzo oludakayo esiphansi.
Uma kuwukuthi uyabhema, zama ukuqeda kulo mkhuba.
Isifo lapho umuntu encishisiwe ingcindezi (hypotension), kodwa akusho kuhilelani nemiphumela eyingozi, kodwa akunjalo ayinangozi. Satellites yokucindezelwa ongaphakeme kukhona ukukhathala, ukuphathwa ikhanda, ukuphazamiseka pheshana emathunjini. Kungasiza lapha esiqinile nokushintsha kokudla nokufakwa isikhathi umsebenzi nokungcebeleka NGAMAFUPHI - imodi kosuku. ukudla okunempilo futhi isikhathi esanele sokulala - okungenani amahora ayisishiyagalombili.
Kodwa, akufanele silindele ukuthi ukucindezela abantu kumele abe ukusebenza esitebeleni.
Ukungazinzi wegazi - zomzimba evamile yomzimba womuntu.
Ngokwesibonelo, kusukela ngokomzimba ukuzikhandla ingcindezi luyanda, ngezinye izikhathi imbangela-high blood pressure kungenzeka kushintsha izimo zezulu. Lokhu kuyinto evamile komzimba - ke uvuma. ukwanda okunjalo esikhathi esifushane kanye nezincane.
Futhi "kuzuba" blood pressure kungase kubangele izici ezifana ukungezwani sezinzwa futhi ukucindezeleka kwengqondo. It nomphumela ofanayo ejenti ukuthi isinyathelo kwemizwa uhlelo ivuselela - yini ikhofi noma itiye eqinile, utshwala.
Ngakho, umfutho wegazi lomuntu kuyinto Isikhombisi esibalulekile empilweni, njenge esimiso senhliziyo nemithambo yegazi kanye wonke umzimba. Lesi sibalo impela ezingabizi sokuzithiba.
Tonometer - idivayisi sokulinganisa ingcindezi, manje ithengwe ngasiphi ekhemisi. Phela, ngisho nempilo enhle, kuyatuseka ukukala ingcindezi, ngakho ungabi kahle ukuthenga ke ikhaya labo ungakuphi.
Kuqondile nama-engeli eduze
Kumiswa izici zobuntu. Isici eyinhloko
Indlela ukukhetha zokulala. Amathiphu ambalwa
Indawo yokudlela "eMoscow Sky" ngesikhathi Enea: amamenyu, ukubuyekezwa
Isaladi lesikhwama, iresiphi yokugubha
Oxysize - phefumula futhi ulahlekelwe isisindo. U-Oxisayz no-Marina Korpan
Imfimbolo njengento ukuhlangana
Sakura lobuhlalu: isigaba master lobuhlalu (isithombe)